Abalibalekileyo, nguDavid Baldacci. Inoveli yesibini kaJohn Puller | Uncwadi lwangoku
Abalibalekileyo, nguDavid Baldacci. Inoveli yesibini kaJohn Puller
Abalibalekileyo. UDavid baldacci
Ukusukela ngo-Okthobha ophelileyo ibisezitolo zeencwadi AbalibalekileyoNguDavid Baldacci (1960). Ingaba i Inoveli yesibini kwi-trilogy ye-arhente ekhethekileyo uJohn Puller. Umbhali obalaseleyo waseMelika uyaqhubeka nothotho kweli gqala lamagqala kwaye mhlawumbi lelona lungu linamava eSebe laseMelika loPhando loPhando.
Kulabo bahlonela ngakumbi eBaldacci, uhlengahlengiso lwefilimu olwenziwe nguClint Eastwood kwinoveli yakhe ngokuqinisekileyo unokufika engqondweni. Amandla apheleleyo (1997). Khumbula ukuba uBaldacci ukwangumbhali wescreen. Ewe, zabo ba vuyayo Baza kusebenzisa, kodwa banenqindi, kolu ngcelele kukho ophambili olungileyo kwaye kuyonwabisa. Awunyanzelekanga ukuba ubuze nangaphezulu ukuba yile nto uyikhangelayo. Makhe sibone ukuba isithathu sipapashwa kungekudala.
1 UJohn Puller Trilogy
1.1 1. Usuku losuku
1.2 2. Abalibalekileyo
1.3 3. Ukubaleka
UJohn Puller Trilogy
Ukudonsa akuyona enye yezona zinto zibalaseleyo, ungoyena ugqibelele. Igqala lemfazwe eMbindi Mpuma ligosa elikhethekileyo kumkhosi wase-US kwaye abaphathi bakhe bamthemba ngokupheleleyo ukuphanda ezona zenzo zolwaphulo-mthetho zinzima kwaye ziyingozi ezinokuchaphazela ukhuseleko lwesizwe. Inkqubo, uqeqesho, uhlala ulungile ...
Ngamanye amagama, oomatshini basemkhosini bahlala bekulungele. Owu, kwaye umnini ikati. Kwakhona Unomntakwabo omdala, uRobert, oyindoda yasemkhosini njengaye, ingqondi yekhompyuter kwaye osebenza isigwebo sobomi ngenxa yokungcatsha umbuso.. Kodwa akukho nto ayicacanga kwesi sigwebo kwaye uPuller uya kuzama ukufumana ukuba yintoni kulo lonke uthotho.
Baphawulwe kakhulu ngoyise, eyomkhosi eyaziwayo neyayihonjisiwe, ngoku egulayo evalelwe kwindlu yokuhlala UDuller umtyelela rhoqo, kodwa ubudlelwane kunye naye bunzima kuba ngamanye amaxesha utata wakhe akamboni kwaye umphatha njengejoni phantsi komyalelo wakhe. Nangeyiphi ndlela, ku-Puller into ebalulekileyo luxanduva kwaye uyayigcina, nangona kamva enokusebenzisa iindlela ezingaphantsi okanye ezingaphantsi.
Uthotho lukaJohn Puller
1. Usuku losuku
Kule noveli yokuqala, uPuller kufuneka aphande ityala kwindawo esemaphandleni nakwanti kakhulu kwingingqi yemigodi yaseNtshona Virginia. Babulele usapho luphela kwaye umhloli omncinci wokubulala amapolisa endawo uyakusebenza kunye noPuller.
Ewe kunjalo, uphando luya kuba nzima ngakumbi njengoko uqhagamshela amachaphaza. Isiphelo sigcina uxinzelelo ngendlela ephumelele kakhulu kwaye ukubamba okumangalisayo akusileli.
Kule noveli yesibini isandula ukupapashwa, UDuller uya eFlorida ukuya kusombulula imeko yakhe: u-anti wakhe ufunyenwe efile, ohlala eParadesi, isixeko esiselunxwemeni kwaye siphumelele kakhulu kukhenketho olutyebileyo oluyindwendwelayo, lutsalwe ziilwandle zalo ezintle kunye nemozulu entle. Amapolisa endawo agqibe kwelokuba ukusweleka, okubonakala ngathi kuwa, kwenzeka ngengozi. Kodwa ngaphambi kokuba umakazi wakhe asweleke, wathumela ileta kuyise kaPuller, apho wamxelela khona ukuba iParadesi ayisiyiyo le ibonakala ngathi. Xa uPuller eqala ukuphanda, ufumanisa ukuba ukusweleka kuka-anti wakhe kude nengozi..
Ndicinga ukuba xa beyipapasha iza kubizwa Ukubaleka o Ukubaleka, kuba yile nto imalunga nokuvuza, kodwa okhethekileyo. UJohn Puller uya kubona ukuba lonke uqeqesho, amava kunye nezakhono zakhe azimncedi nganto xa kufuneka engoyena ufuna umkhuluwa wakhe uRobert, obaleke kwintolongo yezokhuseleko apho akhoyo.
Ukuphuncuka kwakhe ngokungenakuchazwa kumenza ukuba abe sesona saphuli-mthetho sifunwa kweli lizwe kwaye ngubani ongcono kunomntakwabo ukuba ambambe ephila. Kodwa uPuller kungekudala ufumanisa ukuba abantu abaninzi bafuna umntakwabo abafuna ukuba afe.. Ukongeza, babela iarhente njengeqabane elikwenza kube nzima Kwaye inokuba nendlela yayo yokujongana nelo tyala.
Lo mbandela unzima hayi kuphela bubudlelwane bobuchwephesha (kunye nenye into) phakathi kukaPuller kunye neqabane lakhe, kodwa ngobungqina obucacileyo bokuba umntakwabo ugwetywe ngokungafanelekanga. Kwaye umntu akafuni ukuba zonke iinyaniso zaziwe.
Olu luhlu luphumelela kwincwadi nganye kwaye eyesithathu yincopho elungileyo yokuyigqiba okanye yokuphinda uyikhuphe kwakhona kwixesha elizayo ukuba uBaldacci ufuna njalo. Ke Ndiyacebisa ukuba uthanda ukuba nexesha elimnandi ngokufunda ngokulula, ukonwabisa kunye nedosi elungileyo yesenzo kunye noxinzelelo.
Ukwazi ngakumbi, kungcono ukutyelela Iwebhusayithi kaDavid Baldacci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Abalibalekileyo, nguDavid Baldacci. Inoveli yesibini kaJohn Puller
Andimazi lo Puller, kodwa ubeke ubusi emilebeni yam, Mariola. Ndiyibhala phantsi, la mabali azakundicaphukisa 😉
Ewe, ukuba ungena kwiYankee supermen yomkhosi wase-US, le yeyona KAKHULU, heh heh. Ukuba akunjalo, andazi. Kodwa ndiyazi ukuba iziza zilungile, isingqisho naso kwaye isenzo siqinisekisiwe ;-).